Raad Raac News Online – JOOGITAANKA GAAS EE XAMAR WAA UJEEDDO BADAN “Xog iyo Sir Culus”
XOGTA GAAS IYO OLOLAHA XAMAR
Saacadda wey is guraysa ilaa 2 Cisho ayaa ka dhiman xiliga la dooranayo Madaxweynaha Soomaaliya inkasto saadal badan jirtana cidda ku guulaysanaysa waa mid aan sidaa u muuqan “Allahu Aclam”.
Doorashadan ayaa ku soo aaday xili adag oo ka duwan kuwi ka horeyay wana mid xiiso gaar ah leh marka sidoo kale loo eego kuwi hore, waxayna ku soo aaday xili Colaado iyo abaaro xoggan ay dalka ka jiraan guud ahaan.
Muqdisho waxaa ku sugan Madaxda Maamulada dalka kuwaaso u kala olalaynaya Saaxibadooda siyaasadda marka laga reebo Madaxweynaha Maamul Gobaleedka Koonfur Galbeed oo Baydhabo ku laabtay balse labo cisho ka hore ku sugnaa Xamar kaddib markii culays uu uga yimid dhanka Barlamaankisana ku cararay Baydhabo.
Madaxda kale ee Dalka ee joogta Muqdisho waxaa kamid ah Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe inkastoo uu u muuqdo in uu ka gaabsaday in uu muujiyo dhinac raacid Musharixiinta Tartamaya.
Gabal dhicii shalay waxaa yimid Madaxweynaha Puntland C/weli Gaas iyo wafdi la socda inkastoo Gaas uu sheegay in uu u yimid Muqdisho korjooge Doorashada Madaxweynaha ee 8 Febraayo haddana arrinta taas ka fog…. JOOGITAANKA GAAS EE XAMAR WAA UJEEDDO BADAN
Madaxweynaha Puntland wuxuu ahaa Siyaasiga keliya ee ka maqna Madaxda Gobalada markii uu soo gaaray Muqdisho wuxu degay xarunta Olalaha Cumar C/rashiid isagoo ay galbinayan gacanyarayaasha Sharmarke waxayna taasi bixisay sawir kale oo muujinaya in uu ku dhaxmilmaayo Olalaha Gaas.
CUMAR JECLI, XASAN JECLI: XAALKA CABDIWELI GAAS XAMAR U JOOGO.
Maxaa xalay ka socday xarunta ololaha Cumar Cabdirashiid ee Gaas deggan yahay?
Xalay xarunta waa shidaneed. Xarako iyo dhaqdhaqaaq cusub baa ka muuqday. Toddobaadyadii dhowaa guriga murashaxa wuxuu u ekaa mid laydhkiisu sii baqtiyayey, umana ekeyn goob olole doorasho laga wado. Ma badnayn xildhibaannada iyo shaqsiyaadka halkaa gaarayay. Maantase markii halkaa uu galabta gaaray Cabdiweli Gaas, durba isbeddel baa ka muuqday xarunta murashax Cumar Cabdirashiid. Caawasna xildhibaanno iyo shaqsiyaad aan yarayn ayaa kusii qulqulayay halkaa. Goobta qofkii gaadha waxaa uu dareemayaa saxmad iyo jawi ka duwan kii habeennadii lasoo dhaafay goobtaasi ku sugnayd. Rag iyo dumar doora baa goobta weydaaranaya; qaar hor leh oo markaaba soo joogsaday, qaar muraadkii ay lahaayeen soo dhammaystay oo albaabka kasii baxaaya, qaar ballan dhow loo qabtay oo dib u laabanaya, qaar shaqo loo diray oo xog ka sida, in gudaha kula jira murashaxa iyo duqa martida u ah ee Garoowe gurmadka uga yimid, in kale ayaa bersadda iyo qolqolka buuxa oo in fadhida qaar taaganba waa la arkayay. Dadka waxaa ka mid ahaa qaar daaradda hobshaynaya oo isugu jira in wardoon ah iyo qaar haadba u bixi waayay oo cid soo dhoweysa oo muraadkooda kala sheekaysataba waayay.
Haddaba maxaa cusub oo Cabdiweli wadaa xiisahaana dhaliyey? Wax kale ma wadee, waa lacag! Waa tii la jeclaa casrigan dambe. Waa dollar oo beryahanba waa la hadal hayey in murashaxa lacagi uga imanayso Puntland, lana filaayo in Cabdiweli Gaas dhaqso u soo dhiibi doono. Balse warkaasi ma ahayn mid rajo weyn laga qabay, sidaana looma danaynayn. Taa cagsigeeda, Muqdisho beryahan waxaa jirey in aad loogu sheekaysanaayey lacag la’aan ba’an oo Cumar Cabdirashiid soo wajahday awgeed, in ololihiisa doorashadu iyo taageeradii uu helayeyba ay hoos u dhaceen. Murashaxu doorashada waa isaga harayna waaba la yidhi. Balse haddiiba lacagtaasi jirto, lama fileyn in Cabdiweli oo gacanta ku sida boorso dollar ah uu soo dhex fadhiisan doono xarunta laga hago olaha in Cabdirashiid iyo fagaagga Filla Soomaaliya. Waxaase la malaynayay in lacagta Cabdiweli laga sugagay xawaalad lasoo marin doono sida caadiga ahba.
Haddaba Lacagta caddadkeedu waa intee? Ma deeq baa? Ma deyn baa? Ma mid loo hayaa? Mise waa qaan hore oo Gaas lagu lahaa?
Lacagtani laba qaybood bay ka kooban tahay. Tan hore, waa qaybtii ina Cabdirashiid ka helay Lacag labada nin ka dhexeysay oo gacabta Gaas ku jirtay, hanti magaca Puntland dawladda Imaaraadka ina Cabdirashiid uga soo qaaday, Gaasna la ogaa, balse dabadeed lagu heshiiyay in si qarsoodi ah loo xaraashto. Xaraashka hantidaasi la booliyey waxaa fududeysay shirkadda hawlgalka dadban dalka u joogta ee SARACEN. Qayta labaadna waa amaah Cumar Cabdirashiid ka codsaday Gaas, ka dib kolkii iman weyday lacag dawladda Imaaraadku ku ballanqaadday in ku badhitaari doonto ololihiisa doorashada. Waxaa jirta warar tibaaxaya in dawladda Imaaraadku ay wax ka beddeshay qaabkii la filaayey in ay lacagtaasi u bixiso. Madaxda Imaaraadku waxay u sheegeen baa la yidhi murashaxa in ay lacagta siin doonaan haddii uu doorashada ku guuleysto oo keliya. Waxayna u ballan qaadeen in ay bixin doonaan dhammaan kharasha uga baxa ololaha doorasha haddii uu kursiga ku guuleysto. Waxaa kale oo ay usoo jeediyeen in uu saaxiibbadiisa kale ka raadsado amaah uu ololaha doorashada ku galo. Safiirka Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya oo labada oo Cumar iyo Gaasba ay isku shushubtaan waayadan dambe hawlo ay wadaag ku yihiinna ay jiraan, ayaa la sheegay in uu Gaas ka codsaday in uu amaahiyo Cumar lacagta uu ololaha ku gelayo.
Lays yidhi mase noqon!
Iyada oo laga duulayo waqtiga adag iyo hawsha culus ee xukuumadda Gaas hortaalla siiba abaarta culus ee xoolaha madhisay iyo tobanaanka kun ee reer miyiga macaluusha ku sugan iyo socdaalkii uu ku gaadhay degmooyinka Bari, waxaa la malaynayay in odagu beryahan ka yara warwareegi doono imaatinka Muqdisho oo uu baajin doono safarkiisii joogtada ahaa ee uu bishiiba mar ku iman iman Muqdisho. Waxaa la is lahaa Gaas waa qaangaadhey beryahan oo qalbi buu yeeshay oo waakaa waxoogaa u damqaday dadkiisii tabaaloobay. Waxaa la moodey nin kusii dheeraan doona safarkii uu ku marayay degaamada dadka abaaraha ku tabaaloobay isugu tageen iyo gurmad u fidinta dadka tabartu ka reebtay in ay u hayaamaan degmooyinka roobabku ka da’een iyo kuwa caydhoobay ee tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ku soo ururay. Balse waan hamminaye, ninku waa isla kii un. Gaas isma beddelin. Waa kaa soo xaabsaday wixii shilimaad ku ururay qasnadda yar ee xoogaaga dekedda Booso laga helo lagu rido. Waa shilimaadkii yaraa ee la sugaayey in biyo loogu dhaamiyo dadka iyo xoolaha abaarta yaal. Waa shilimaadkii yaraa ee laga qaaday islaanta maskiinta ah ee balbalo ku taal suuqa Garoowe caana ku iibisa. Mushaarkii bilaha badan ka maqnaa askariga difaaca amniga iyo nabadda dalka qorraxda iyo dhaxanta dharaar iyo habeenba u taagan. Waa kaas Cabdiweli Gaas boorsada doollarka ah u soo kireystay diyaarad khaas ah oo isaga iyo dhawr wiil oo naaxay.
Gaas iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale la doorto?
Kulankii Garoowe ku dhex maray Cabdiweli Gaas iyo ergo Itoobiyaan ah oo farriin ay ka sideen Raisalwasaarahooda Gaas u dhiibay. Maxay ahayd farriintaasi? Maxaase Gaas laga dalbay?
“Aad Xamar oo Xasan taageer.”. WAA UJEEDDADA WEYN EE Gaas u yimid una joogo xamar waa amarki ay xambarsanayd Fariintii Addis Ababa katimid ee ay Ergado Garoowe keentay.
Xaggee baan raacaa? Ma Itoobiya baan tooda yeelaa oo saaxiibkeeda ay dhawaan caashaqday baan ka tumaa? Mise imaaraadkaan raalligeliyaa oo wiilka Cumar ah; mar waa gacalkay (xididkay) marka ganacsi kumeelgaar ah aan ku jirno? Xaalka Gaas ku soo ururi un “hashii laba midigle dheelmay dhanna uma fayooba.”
Qormada Todobaadka ee Raad Raac News